महामारीको कारण सरकारले सार्वजनिक स्थलमा २५ जना बढी भेला हुन निषेध गरेको छ । सभा–सम्मेलन, कार्यक्रममा बन्देज लगाएको छ । तैपनि दशरथ रंगशालामा नेपाल र मोरिससको दुई अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलमा एकतिहाइ (करिब ५ हजार) दर्शक प्रवेशका लागि अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) लाई स्वीकृति दियो ।
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा र महासचिव इन्द्रमान तुलाधरले गत साउन १७ गते भएको छलफलमा सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग २०७८ मा क्लबहरूलाई तयारी खर्च २०–२० लाख रुपैयाँ दिने भनेका थिए, जसलाई त्यो भेलाले निर्णय पनि गरेको थियो ।
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) मा वित्तीय निर्देशक (फाइनान्स डाइरेक्टर) का लागि पदपूर्ति समितिले दुई जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्टको सिफारिस गरेको थियो । नम्बर १ मा थिए रमेश न्यौपाने र २ नम्बरमा निरञ्जन शाह । सिफारिस गरेको केही महिनापछि एन्फाले दोस्रो नम्बरका शाहलाई वित्तीय निर्देशक नियुक्त गरेको थियो । एन्फामा २०२० को जनवरीदेखि काम थालेयता उनी लगातार विवादमा मुछिएका छन् ।
सुनीलको गोल र मछिन्द्रको भाग्य
डिफेन्डिङ च्याम्पियन मछिन्द्रविरुद्ध विभागीय टिम पुलिसको प्रदर्शन गतिलो थिएन । उसले दोस्रो हाफमा भने आच्छुआच्छु नै पार्‍यो । तैपनि पूरा खेलमा एकपल्ट पनि ‘फ्रेम’ मा बल प्रहार गर्न सकेन ।
विमलको ‘कमब्याक’ गोल
सबैभन्दा बढी ‘एक्सपोजर’ पाएका फुटबलर हुन् विमल घर्तीमगर । उनले उमेर समूहमा खेल्दाखेल्दै बेल्जियम, फ्रान्स, स्पेनका क्लबमा ट्रेनिङ गरे अनि ट्रायल दिए । यी फरवार्ड युरोपेली क्लबमा अनुबन्ध नजिक पनि पुगेका थिए । त्यसमा पारिवारिक समस्या र चोट बाधक बन्यो । दोहाको अत्याधुनिक अस्पताल अस्पेटरमा ९ महिनाअघि दायाँ घुँडाको शल्यक्रिया गराएका उनले मैदानमा फर्केयता पहिलो गोल शनिबार गरेका छन् ।
बर्खाले जुराएको जग्गा
दुई महिनाअघिको मात्रै कुरा हो एनभीए राष्ट्रिय क्लब भलिबल च्याम्पियनसिपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने तयारीमा जुट्नु थियो । घरेलु प्रतिष्ठित च्याम्पियनसिपको आयोजना बर्खाको अन्त्यतिर हुँदै थियो । तर बर्खा रोकिएन । त्यसैले सहभागी टिमहरूलाई तयारीमै समस्या पर्‍यो । किनभने क्लबहरूसँग अभ्यास गर्नर् मिल्ने इन्डोर हल थिएन/छैन ।
किन दिए १६ रेफ्रीले राजीनामा ?
सहिद समारक ‘ए’ डिभिजन लिगकै दौरान ‘फिटनेस टेस्ट’ गर्न दबाब दिएपछि बिहीबार लिगमा संलग्न २४ रेफ्रीमध्ये १६ जनाले संयुक्त राजीनामा दिएका छन् । फिटनेस टेस्टलाई सार्न वा तयारी गर्ने समय दिन आग्रह गर्दा अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) का अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पाले दुर्व्यवहार गरेको आरोप लगाउँदै उनीहरूले अब खेल सञ्चालनमा संलग्न नहुने बताएका छन् ।
राणा शासन कालमै नेपालमा रग्बी खेल्न थालिएको थियो । तैपनि यो खेल लामो अवधिसम्म फोहोरा दरबार र केही दूतावासमै सीमित थियो । सर्वसाधारणको पहुँचभन्दा धेरै टाढा थियो, नजिक ल्याउने प्रयास भएको थिएन । त्यसैले २०६० को दशक आइपुग्दा धेरैले भन्थे– नेपालमा पनि रग्बी खल्छ र ?
सहिद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग फुटबलमा दोस्रो चरणसम्मको प्रदर्शन हेर्ने हो भने डिफेन्डिङ च्याम्पियन मछिन्द्र नै सबैभन्दा राम्रो टिम देखिएको छ । यो सिजन नाम चलेका युवा, अनुभवी र विदेशी खेलाडीको लामो सूची बनाएको क्लब मछिन्द्र नै हो । तैपनि मछिन्द्रले दशरथ रंगशालामा आर्मीको चुनौती पन्छाउन सकेन ।